Madax ka tirsan Dowladdii KMG iyo Kenya oo magaalada Nairobi uga furmay shir xasaasi ah (Maxay ka hadlayaan?)
Waxaa Nairobi ka socda shir xasaasi ah oo u dhaxeeya wakiilo ka socda guddoomiyihii hore ee Baarlamaankii KMG ahaa Shariif Xasan Sh. Adan, Ra’iisul wasaarihii hore A/wali Cali Gaas iyo Saraakiil ka tirsan dowlada Kenya.
Waxaa la sheegayaa in arrinkaan xarriir la leeyahay danaha dowlada Kenya ay ka leedahay Somaaliya sida maamulka Jubaland (Bufferzone) iyo shirkadaha shisheeyaha ah ee baarista badroolka ka wada xuduudaha Kenya iyo Somaaliya. Hadaba waxaa xusuus mudan markii ay ciidamada Kenya si sharci daro ah u soo galeen gudaha Somaaliya sanadkii hore in khilaaf xoog leh uu ka dhashay, kaas oo u dhaxeeyay madaxda sare ee TFGda.
Sidoo kale waxaa jira aragti ka duwanaan karta tan oo ah loolanka ka dhaxeeya region ka (Gobolka), sida Uganda iyo Kenya oo labaduba hadda ka wada tirsan AMISOM. Dowlada Kenya ayaa walwal ka qabta xariirka qotada dheer ee ka dhexeeya Sh. Sariif iyo Dowlada Uganda. Hadaba si ay u miijiso kaalinta ay ku yeelan karto arrimaha Somaaliya ayay ka go’an tahay dowlada Kenya in ay door ku sheeshaan hogaanka sare ee Somaaliya.